Lamb Weston Meijer wuxuu noqonayaa milkiilaha ugu weyn ee warshadda shiilan ee Lipetsk Faransiiska - Magazine Magazine Nidaamka Baradhada
FAS Russia waxay ogolaatay codsigii shirkada Dutch-ka ah ee Lamb Weston Meijer si ay u hesho ku dhowaad 40% saamiga caasimada idman ee soo saaraha kalluunka Faransiiska ee Lipetsk Lam Weston Belaya Dacha LLC, Abireg ayaa warinaya.
Sidaas awgeed, mas'uuliyiinta la-dagaallanka hanti-wadaagga waxay u oggolaadeen Lamb Weston Meijer inuu helo 39,38% saamiga shirkadda Lipetsk, oo marka lagu daro kuwa hadda jira ay gaarayaan 74,5%. Sida laga soo xigtay Kartoteka.ru, hadda milkiilaha ugu weyn ee shirkadda waa shirkadda Viktor Semyonov ee Belaya Dacha Group of Companies. Shirkaddu waxay leedahay 64,48%.
Waa in la ogaadaa tan iyo markii la aasaasay shirkadda, milkiilayaashu waxay lahaayeen 75 iyo 25%, siday u kala horreeyaan. Si kastaba ha noqotee, dhammaadka 2018, Lamb Weston Meijer ayaa ka codsaday FAS codsi ah in la kordhiyo saamiyada ay ku leedahay caasimadda oggolaanshaha shirkadda. Sannadkii 2019, shirkadda Dutch-ka waxay billowday inay yeelato 31,13% saamiga, markii dambena - 35,52%.
Xusuusnow in bishii Abriil ee sannadkan, kooxda shirkadaha Belaya Dacha ay joojiyeen shaqadii warshaddii shiilanayd ee Faransiiska sababo la xiriira hoos u dhac ku yimid isticmaalka wax soo saarka, oo dib u bilaabay kaliya bishii Ogos. Intii lagu guda jiray nasashada shaqada, warshadu waxay sameysay casriyeyn baaxad leh oo soo saar leh oo u dhiganta 650 milyan oo rubi, taasoo suurta galisay in si weyn loo kordhiyo xawaaraha waxsoosaarka baradhada lana wanaajiyo tayada wax soo saarka la dhammeeyay
Tags: "Belaya Dacha"Wan weston meijerGobolka LipetskWax soo saarka shiilan ee Faransiiska